सहकर्मीसँग सम्भावित क्रेडिट के हो? वित्तीय लिङ्कमा परिभाषा
सुरु ऋण wiki साथीहरूको-सहकर्मी उधारो
1 साथीहरूको सहकर्मी के हो?
2 सहकर्मीसँग सहकर्मी क्रेडिटको कारण
3 परिवार र मित्रहरू
4 सह-सह-साथीको लागि अनलाइन बजार
साथीहरूको सहकर्मी के हो?
एक साथीहरूको-सहकर्मी उधारो एक निजी व्यक्ति द्वारा अर्को निजी व्यक्ति को लागि एक दिशानिर्देश दिइएको छ। साथी एक व्यक्ति हो जुन बराबर छ र अर्को व्यक्तिको रूपमा एक समूहसँग सम्बन्धित छ। यसको विपरीत, एक निजी व्यक्तिगत र एक बैंक को बीच एक उच्च पदानुक्रम छ।
पैसा Leihens यस प्रकारको पनि व्यक्ति-व्यक्ति उधारो रूपमा जानिन्छ - एक साधारण संक्षिप्त P2P छ। यदि तपाईं आफ्नो भाइ वा आफ्नो मित्रबाट पैसा लिनुहुन्छ भने, यो यस्तो ऋण हो।
यद्यपि, लेनदारहरू र उधारकर्ताहरूलाई एकअर्कालाई थाहा छैन। उदाहरणका लागि, निजी व्यक्तिहरू बीचको ऋणमा खोज्ने वा दिइएका इन्टरनेटहरूमा प्लेटफर्महरू छन्।
सहकर्मीसँग सहकर्मी क्रेडिटको कारण
सहकर्मीसँग सहकर्मी क्रेडिटले साथ साथै अन्य क्रेडिट मोडेलको विरूद्ध हानि हुन सक्छ।
जब तपाईं बैंकमा ऋण लिनुहुन्छ, प्रशोधन शुल्क जस्ता अतिरिक्त लागत उठ्न सक्छ। साथै, धेरै बैंकहरू मुक्त कम्पनीहरू छन् जसले आर्थिक रूपमा काम गर्न र लाभ कमाउन चाहन्छन्।
सहकर्मी-सह-साथीको स्थितिमा, यस मुनाफा (यदि ब्याज सहमत छ) ले अर्को व्यक्तिलाई सीधा लाभ गर्दछ। यदि एउटै व्यक्तिले तपाइँको पैसा बैंकको साथ दिईएको थियो भने, तपाईले धेरै मामिलामा निजी ऋण भन्दा अर्को ब्याज दरको अर्को व्यक्तिलाई प्राप्त गर्नुहुनेछ।
केही उधारकर्ताहरूले उधारदार्थहरूको मानव बुझाइलाई पनि आशा गर्छन् - उदाहरणका लागि, यदि पुनरावृत्ति ढिलो भएको छ वा स्पष्ट छ, उधारो रकम पैसा फिर्ता गर्न सकिन्छ जबसम्म।
तथापि, खुलापन भुक्तानी गर्दा बुझ्न र सम्भावित समस्याहरूको इच्छा ऋणदाताको लागि एक संभावित हानि हो। यदि तपाईं एक व्यक्तिको लागि पैसा उधार गर्नुहुन्छ र एक निश्चित क्रेडिट अवधिमा सहमति भएको छ भने तपाई यस समय पछि पैसा दावी गर्न सक्नुहुनेछ। एक बैंक एक स्थापित दृष्टिकोण छ र सामान्यतया वकीलहरूसँग काम गर्दछ जसले नियमित रूपमा त्यस्ता परिस्थितिहरूमा समावेश गर्दछ। निजी व्यक्तिको रूपमा, यसको मतलब तपाईको लागि धेरै प्रयास हो।
तथापि, सहकर्मीसँग सहकर्मीको प्राप्तकर्ताको लागि हानि पनि सम्भव छ। धेरै उधारकर्ताहरूले ऋण उधार लिने गर्दछन्। व्यक्तिगत वातावरणमा यो असंतुलन हुन सक्छ र दोष मित्रता र सम्बन्धमा बोझ हुन सक्छ। यदि तपाईं आफैं ऋणदाता हुनुहुन्छ भने, तपाईं स्ट्राइक गर्न को लागी एक पैसा को लागी रकम तिर्नु पर्ने हुन सक्छ।
यसको अतिरिक्त, सहकर्मीसँग सहकर्मी क्रेडिटको लागि इन्टरनेटमा भौगोलिक प्लेटफर्महरू छन्। गम्भीर र अविश्वसनीय प्रस्तावहरू बीच भेद गर्न अक्सर अनुभवहीन उधारकर्ताहरूको लागि चुनौती हो।
परिवार र मित्रहरू
अंग्रेजीमा पनि, अंग्रेजी विवरण "परिवार र मित्रहरू" प्रायः प्रयोग गरिन्छ जब तपाईं पैसा लिनुहुन्छ वा व्यक्तिगत व्यक्तिको व्यक्तिबाट पैसा पाउनुहुन्छ। मित्र र परिवारबाट उधारिएको पैसा प्रायः धेरै अनौपचारिक विनियमित हुन्छ। धेरै अवस्थामा, केवल एक मौखिक सम्झौता हो, जसलाई तथापि पनि बाध्य छ।
रिट्यान्स वा साथीहरु बाट ऋण को लागी प्राय: चासो सहमत छैन, यदि तिनीहरू केवल सानो मात्रामा हुन्छन्। ऋणदाताले सधैं लाभप्रद योजना पछ्याउँदैन, तर साथी वा परिवारको सदस्यलाई कठिन परिस्थितिबाट मद्दत गर्न चाहन्छ। यद्यपि, चासो सिद्धान्तमा बहिष्कार गरिएको छैन, विशेष गरी उच्च नामांकित मानहरू।
सह-सह-साथीको लागि अनलाइन बजार
इन्टरनेटमा, त्यहाँ विभिन्न प्लेटफर्महरू छन् जुन सम्भावित उधारकर्ताहरू र खरिदहरूलाई सहकर्मीसँग सहकर्मी पाउन सकिन्छ। एक उधारकर्ता एकै समयमा एक वा बढी उधारदायी हुन सक्छ।
केहि अवस्थामा, यी नीलामीहरूमा ऋणहरू यी प्लेटफर्महरूमा राखिएका छन्। यस मामला मा, या तो उधारकर्ता एक संभावित ऋणदाता या उप विपरीत मा लागू हुन्छ। मिश्रणहरू पनि सम्भव छन्।
सहकर्मीसँग सहकर्मी ऋणको लागी अनलाइन बजार स्थलहरूले ऋणको सर्तहरूको समान धारणाहरू सँगसँगै ल्याउने लक्ष्यलाई पछ्याउँछ। उधार्ने कारण पनि ऋणदाताको लागि भूमिका खेल्न सक्छ। एउटा उदाहरण हो microcredit साना व्यवसायहरू वा पहलहरू।
अघिल्लो लेखउद्देश्य विवरण
अर्को लेखडायपर झोला